Ukuhlaziywa Kwezinto Ezingahluziwe - ISuzhou Bricmaker Automation Co., Ltd.
Izinto zokusetshenziswa zekhwalithi zizoba impumelelo elula. Fly ash, Tailings, Construction waste, Shale, River silt, Waste inhlabathi, Loess, Life sludge, iGangue.
Umsebenzi oyinhloko wokusetha isitshalo sezitini: Izinto zokwenziwa kwamakhemikhali kanye nezinto ezibonakalayo (kufaka phakathi ukushisa kwangaphakathi komlilo, njll.) Ukuhlolwa, okwamanje kulinganisa umswakama wezitini eziluhlaza ezakha & extrusion.
Ukuhlaziywa kokwakhiwa kwamakhemikhali kuvame ukulinganiswa njengeSiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO, magnesium oxide, isulfure gangue, ukulahleka kokushisa kanye nokunye.
I-SiO2: Okuqukethwe kuphakeme kakhulu, i-plasticity ephansi, yize ilungele ukomiswa okusheshayo, kepha imikhiqizo eqediwe enamandla aphansi acindezelayo.
I-Al2O3: Uma ingaphansi kuka-12%, amandla emishini yemikhiqizo ancishisiwe, uma kungaphezu kwama-24%, izinga lokushisa lokudubula liyakhuphuka, lenyusa inani lamalahle.
I-Fe2O3: Okuqukethwe okuphezulu kakhulu kuzonciphisa imikhiqizo e-refractoriness, okuholele ekushiseni okuncane kokushisa.
I-CaO: Yethula Esimweni se-CaCo3 ezintweni ezingavuthiwe, ezihlukaniswa njengezinto ezinobungozi, Uma izinhlayiya ezinkulu kune-2mm, kungenzeka ukuthi zidale isitini esikhanyayo noma ukuqhuma lapho kusha.
I-MgO: Ukuncipha kokungcono, ngaphandle kwalokho, imikhiqizo ekhula kalula ikhiqiza i-magnesium, ibangele i-hoarfrost emhlophe.
Isibabule Dagan: Njengoba sulphate entweni eluhlaza, okuqukethwe akufanele kudlule u-1%. Lapho ivutha, izokwenza i-SO2 futhi idle imishini yolayini wokukhiqiza, ibe yingozi empilweni yabasebenzi.
Ukulahlekelwa kokushisa: Kubangelwe yimvelo ezintweni zokusetshenziswa. Uma ukulahleka okuphezulu ekushiseni, isilinganiso semigodi eminingi yemikhiqizo.
Ingxenye Yamakhemikhali SiO2 Ifanele 55 ～ 70
Iyatholakala 55 ～ 80
Al2O3 Ifanele 15 ～ 20
Iyatholakala 10 ～ 25
I-Fe2O3 Ifanele 4 ～ 10
Iyatholakala 3 ～ 15
I-CaO Iyatholakala 0 ～ 10
MgO Iyatholakala 0 ～ 3
SO3 Iyatholakala 0 ～ 1
ukulahlekelwa ngokushisa Iyatholakala 3 ～ 15
Okuqukethwe kwe-Calcareous ＜ 0.5mm Ifanele 0 ～ 25
2, 0.5mm Iyatholakala 0 ～ 2
Ukuhlaziywa Kokusebenza Komzimba: Imvamisa kukala izinhlayiya ezakhiwe, i-plasticity, ukuncipha, ukomisa ukuzwela kanye nekhono le-sinter.
Ubupulasitiki: Lapho inkomba yepulasitiki ngo-7 ~ 15, ifaneleka kakhulu ekukhipheni udaka oluphakathi kwepulasitiki.
Ukuncipha: Ukuncipha komugqa <6%, uma kuphezulu kakhulu ukuqhekeza imikhiqizo, kuthinta ikhwalithi yezitini.
Ukomisa ukuzwela: Ukuphakama kwempahla eluhlaza okuluhlaza, ukucoleka kwezinhlayiya, futhi kuphakama ukuzwela kokuqina. Ukuzwela kokulingana kunquma inqubo yokomisa inqubo, imbangela ephezulu kakhulu yezitini eziluhlaza.
Ubudlelwano bokwakha umswakama nokomisa ukuzwela
Umswakama obumba isitini oluhlaza okotshani
Amanzi abucayi wezitini eziluhlaza
Ukomisa ukulingana kokuzwela
Ukuhlaziywa kwamakhemikhali ngezinto zokusetshenziswa, izakhiwo zomzimba kanye nokuhlolwa kokubumba umswakama kunquma ukuthi kungenzeka yini ukusebenzisa izinto zokusetshenziswa futhi kuthinte inqubo elandelayo yokuklanywa, ukukhethwa kwemishini, ukwakheka komlilo, ikhwalithi yomkhiqizo nezinye izici zohlelo lokukhiqiza.